အလုပ်လုပ်တဲ့ Messenger ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အကောင်းဆုံး Facebook Lite client Androidsis
ကျွန်ုပ်သည် Mark Zuckerberg တီထွင်ခဲ့သောလူမှုရေးကွန်ယက်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အလွန်တန်ဖိုးမထားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြောင်းပြချက်များကြောင့်ယင်းကိုကိုင်တွယ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေသော်လည်းယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်းမျှဝေရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် တရားဝင် Facebook applications များ (သို့) Facebook Lite ကိုမသုံးပဲ Android မှ Facebook သို့ချိတ်ဆက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ငါ့အဘို့အက်ပလီကေးရှင်းများသည်သူတို့၏ဗားရှင်းနှစ်ခုတွင်အမှိုက်ပုံအမှန်ဖြစ်သည်။
လူအများအပြားတို့သည်၎င်းတို့ကိုများပြားလှသောကြောင့်အခြားရွေးချယ်စရာဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သုံးစွဲသူများကိုအသုံးပြုခဲ့ကြသည်၊ သို့သော်ယနေ့တွင်ငါနှင့်အတူ Facebook ကိုပျော်မွေ့ရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုကိုပြမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်နှင့် အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်သော Messenger ဖြင့် ဖန်တီးထားသော Facebook Lite။
1 ပထမနည်းလမ်း - သင်၏ကိုယ်ပိုင် Web App ကိုသင်၏ Web browser ဖြင့်ဖန်တီးပါ (Messenger အသုံးမဝင်)
2 ဒုတိယနည်းလမ်း - Hermit အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင် Facebook Lite ဖန်တီးပါ
2.1 Hermit ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
ပထမနည်းလမ်း - သင်၏ကိုယ်ပိုင် Web App ကိုသင်၏ Web browser ဖြင့်ဖန်တီးပါ (Messenger အလုပ်လုပ်ခြင်းမရှိပါ)
ဤအကြံဥာဏ်ကိုရိုးရှင်းသောလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာတစ်ခုအနေဖြင့်စတင်ရန် Messenger ကိုမသုံးရန်မလိုသောအသုံးပြုသူများကိုပြောပါ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင် Facebook Lite ကိုဖန်တီးခြင်းသည်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော web browser ကိုဖွင့်ရန်လွယ်ကူသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ Chrome, Firefox, Brave, Opera သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ၏ browser သည်ဖြစ်စေ Facebook စာမျက်နှာကိုဖွင့်ပြီး log in လုပ်ပါ။ အကြောင်းကြားစာများပို့ခြင်းကိုလက်ခံပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကိုယ်ပိုင် app web ကိုဖန်တီးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ desktop ပေါ်ရှိဖြတ်လမ်းတစ်ခုဖန်တီးရန် browser ကိုပြောပါ.
ဒါကကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးဖို့ပထမ ဦး ဆုံးရွေးစရာဖြစ်ပြီး၊ သူအားလုံးအတွက်အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်ဖို့ဘယ်လောက်လွယ်ကူပြီးရိုးရှင်းပါတယ် Facebook Chat application ကိုမသုံးသောကြောင့်၎င်းတို့သည် Messenger ပေါင်းစည်းမှုကိုမလိုအပ်ပါ ကိစ္စမရှိပါဘူး။
ဒုတိယနည်းလမ်း - Hermit အက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင် Facebook Lite ဖန်တီးပါ
လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ရသေ့ ဂူဂဲလ်ပလေးစတိုးမှအခမဲ့ဒေါင်းလုတ်လုပ်လို့ရပြီ ကိုယ်ပိုင် Messenger ဖြင့် Facebook Lite ကိုဖန်တီးပါ ဒီပို့စ်ရဲ့အစမှာကျွန်တော်ထားခဲ့တဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာရိုးရှင်းတဲ့အဆင့်တွေကိုလိုက်နာပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Facebook Lite ကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်းအပြင် ဒီ app က Lite application တွေကိုအလိုအလျောက်ဖန်တီးခွင့်ပေးတယ်အကြံပြုထားသော application များထဲမှတစ်ခုမှတိုက်ရိုက် application မှသော်လည်းကောင်းကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးဝက်ဘ်စာမျက်နှာများမှ lite applications များသို့မဟုတ် Web Apps များဖန်တီးနိုင်သည်။
တစ်ခုတည်းသောကန့်သတ်သည် အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲလ်မှ Lite application သုံးခုကိုသာဖန်တီးခွင့်ပြုသည် တူညီသော Android terminal ၌တည်၏။
Hermit အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖွင့်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook Lite ကိုဖန်တီးခြင်းသည် Messenger ပုံလေးကိုရွေးချယ်သကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ပင်မ desktop သို့တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုလက်ခံသည်။
ဒီနည်းနဲ့ငါတို့ Facebook Lite ကို Messenger နဲ့အတူမိုဘိုင်းစက်ကနေအပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်မှာပါ။ မူရင်း Facebook အက်ပလီကေးရှင်းမှကူးယူရန်မလိုအပ်ပါ ဥပမာအားဖြင့် application အိုင်ကွန်ကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook Lite ၏အခင်းအကျင်းသို့မဟုတ်အသားအရေကိုပြောင်းလဲခြင်း (သို့) Facebook ကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်စွဲလန်းစေသောကြော်ငြာများကိုပိတ်ဆို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများပင်။
မည်သည့်ရွေးချယ်မှုကိုမဆိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောမည်သည့်နည်းလမ်းမဆို Messenger နှင့်လိုက်ဖက်မှုမရှိသော Web App အနေဖြင့် Desktop သို့တိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်နိုင်သည့်မည်သည့် web browser မှမဆိုဒုတိယ option သည် Hermit မှကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် Facebook Lite ကိုဖန်တီးသည်။ အပြောင်းအလဲအတွက်မင်းရဲ့ Android ကသင့်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကျေးဇူးတင်ပါလိမ့်မယ် တရားဝင် Messenger၊ တရားဝင် Facebook သို့မဟုတ်တရားဝင် Facebook Lite ကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းများကိုဖယ်ရှားပြီးနောက် ၎င်းသည်သင်၏ terminal ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မယုံနိုင်လောက်အောင်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်အကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံး သင်၏ Android ၏ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ပေးသည်.
ငါပို့စ်ရဲ့အစမှာမင်းကိုငါထားခဲ့တဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာ၊ ငါတို့ကိုယ်ပိုင် Facebook Lite ဖန်တီးဖို့ဒီနည်းလမ်းနှစ်ခုကိုသင်ပေးတာအပြင်ငါလည်းသင်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင် Facebook Lite သုံး၍ ပင်ကျွန်ုပ်တို့အား Facebook ကပေးပို့သောအသိပေးချက်များကိုလက်ခံရရှိရန်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်။ ဒါကြောင့်သင်နှင့်သင်၏ Android terminal၊ အထူးသဖြင့်နောက်ဆုံး terminal အတွက်အလွန်အသုံးဝင်လိမ့်မည်ဟုထင်သောကြောင့်ကြည့်ရှုရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်။
Hermit ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ
Hermit - Lite အက်ပ်များ ဘရောက်ဆာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » အလုပ်လုပ်တဲ့ Messenger ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အကောင်းဆုံး Facebook Lite client ရှိမှာသေချာပါတယ်
risn ‡ icris †ဏ ဟုသူကပြောသည်
Android နှင့် Firefox ကိုသုံးသူများအတွက် Facebook နှင့် Messenger ရယူနိုင်သည့်နောက်ထပ်လက်တွေ့ကျကျနည်းလမ်းမှာ add-on ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်။ Mozilla extensions store မှမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် Facebook Chat ကို Unblock လုပ်ခြင်း။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းရုံဖြင့် Messenger သည် Facebook မှလည်ပတ်လိမ့်မည် (mobile web version)
Ån‡ icris †ကိုပြန်ပြောပါ
ငါခဏ Chrome နဲ့ shortcut ကိုသုံးခဲ့တယ်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည် Chrome သည် Facebook app ထက်ဘက်ထရီပိုမိုသုံးစွဲသည်ဟုခံစားခဲ့ရသည်။
ငါ Swipe ကို၎င်း၏ Pro version တွင်အသုံးပြုသည်။ Francisco Ruiz ကအကြံပြုသည်။ အစာရှောင်ခြင်း
မေလ ၂၅ ရက်အထိအသက် ၁၆ နှစ်အောက်ကလေးများအား WhatsApp ကို သုံး၍ မရပါ